Qadar oo ay tegista Kismaayo wax badani u WEHLIYAAN (Maxaa is bedelay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Qadar oo ay tegista Kismaayo wax badani u WEHLIYAAN (Maxaa is bedelay?)
Qadar oo ay tegista Kismaayo wax badani u WEHLIYAAN (Maxaa is bedelay?)
(Kismaayo) 18 Juun 2020 – Safiirka dalka Qadar ugu qaybsan dalka Somalia, Md Xasan Hamza, ayaa goor dhow ka degey magaalada Kismaayo, halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen madax iyo mas’uuliyiin kala geddisan oo ka tirsan Maamulka Jubbaland.
Waxaa dadka soo dhoweeyey ka mid ah Madaxweyne Xiigeenka 1-aad ee Maamulka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan. Waxaa sidoo kale qaab cashwaa’i ah oo aan isku dubba ridnayn usoo dhoweeyey dad fara badan.
UJEEDKA QADAR – Ujeedka dul ka xaadiska ihi waa furitaanka goob waxbarasho iyo meel agoonta lagu xanaaneeyo, sida aannu xogta ku heleeyno, yeelkeede, dhanka kale Dowladda Qadar ayaa sida uu Hadalsame fahamsan yahay waxay furfuraysaa siyaasaddeeda Somalia, iyada oo muddaba olog dhow la ah DF Somalia ayay haatan bedelaysaa oo geedaynaysaa qaabka qoob ka ciyaarka.
Qadar ayaa doonaysa inay iminka isku ballaariso gobollada, iyada oo wadda mashaariic kala duwan oo ay gobollada ka fulinayso, iyada oo horay Galmudug ka dhagax dhigtay mashruuc ballaaran oo uu dib u dhigay cudurka karuunuhu. Waxay sidoo kale dawo gaysey Somaliland, iyada oo la sheegay inay sidoo kale ku wajahan tahay Puntland.
Lama oga inay arrintan isku loox ka yihiin iyaga iyo Qadar, balse qorshahan ayaa ah mid waafaqsan xaaladda kala guurka ah ee uu dalku haatan ku jiro, haddii si kale loo yiraahdana waa boos qaadasho siyaasadeed.
Previous articleBahda Hadalsame Media oo ka tacsiyaynaysa geerida naxdinta leh ee marxuum Maxamed Baashe
Next articleHalkee ku dambeeyey ”KHILAAFKII” Farmaajo & Khayrre? (Arrin naadir ah oo ay sameeyeen!)